ကူဖီ မလိုင် (Kulfi) | Wutyee Food House
« ငါးပုတ်ခြောက် ထမင်းကြော်
ဘဲသား ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ »
March 15, 2012 by chowutyee
ပူနွေးတဲ့ ရာသီမှာ အမောပြေ ကူဖီမလိုင် လေးအိမ်မှာပါ လုပ်စားနိုင်အောင်ပါ။ အိန္ဒိယ ရေခဲချောင်းဖြစ်တဲ့ ကူဖီမလိုင်မှာ ရေခဲမုန့်လို ခရင်(မ်)၊ ကြက်ဥတို့ မပါဝင်ပါဘူး။ ကူဖီမလိုင် လုပ်ရာမှ ပျစ်သွားအောင် ခရင်(မ်) မထည့်ပဲ ဆန်မှုန့်ကို ထည့်ထားပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ စားနေကျ ကူဖီမလိုင်နဲ့တော့ အရသာသိပ်မတူပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင် ရန်ကုန်မှာ ၀ယ်စားနိုင်တဲ့ ကူဖီမလိုင်အများစုက နို့ဆီနဲ့ လုပ်ထားလို့ပါ။ ၀တ်ရည် ခုလုပ်တဲ့ အိန္ဒိယစတိုင် စစ်စစ် ကူဖီမလိုင်က နွားနို့ရယ်၊ သကြားရယ်၊ ဖာလာအနံ့လေးနဲ့လုပ်တာမို့ ချိုစိမ့်ပြီ အိန္ဒိယရနံပလေးပါ သင်းစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်တဲ့အခါ အချိန်တော့ ပေးပြီ လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ချက်နည်းလေး ကြည့်ရအောင်…
၁။ နွားနို့ (full fat milk) – ၁ လီတာ
၂။ သီဟိုဌ်စေ့ (သို့) ဗန်ဒါသီး – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်းစာ (မညက်တညက် ထောင်းထားပေးပါ)
၃။ ဆန်မှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၄။ သကြား – စားပွဲတင်ဇွန်း ရဇွန်း
၅။ ဖာလာမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က် (သို့) ဖာလာမှုန့်အစား ဖာလာစေ့များကို ထောင်းထည့်လျှင်လည်း ရသည်။
၁။ အရင်ဆုံး ဒယ်အိုးတစ်ခုထဲသို့ နွားနို့ (၁လီတာ)ကို လောင်းထည့်လိုက်ပြီ မီးနည်းနည်းဖြင့် ဆူအောင် တည်ထားပေးပါ။
၂။ နွားနို့ပူလာပြီဆိုမှ (ဆန်မှုန့်၊ ထောင်းထားသော သီဟိုဌ်စေ့ (သို့) ဗန်ဒါသီး) တို့ကို နွားနို့နည်းနည်းဖြင့် ခွက်တစ်ခုထဲတွင် အရင်ဖော်ပြီမှ ဒယ်အိုးထဲ လောင်းထည့်ပြီ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၃။ ချိုစိမ့်အောင် သကြား(စားပွဲတင်ဇွန်း ရဇွန်း)ကို ထည့်ပြီ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၄။ နွားနို့ တ၀က်လောက်ပဲ ကျန်သည်အထိ ၁နာရီခန့် မီးနည်းနည်းဖြင့် တည်ထားရမည်။ နွားနို့ပေါ်မှ အမြုပ်များ၊ မလိုင်ဖတ်များတက်လာလျှင် ဆက်မွှေပေးနေပါ။
၅။ နွားနို့လည်း တ၀က်လောက်ကျန်သည့်အချိန်မှ အနံ့အတွက် ဖာလာမှုန့်လေးများ ထည့်ရောမွှေပေးပြီ မီးပိတ်ထားလိုက်ပါ။
၆။ ပြီလျှင် ကူဖီမလိုင်အိုးကို လုံးဝအေးသွားသည်အထိ အအေးခံထားပါ။
ရ။ ပြီနောက်မှ ကူဖီမလိုင်များကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပုံစံခွက်ထဲသို့ လောင်းထည့်ပေးပြီ ၂နာရီခန့် ရေခဲသေတ္တာ ခဲသောနေရာတွင် ထည့်၍ ခဲထားပေးပါ။
၈။ ကူဖီမလိုင်မသုံးဆောင်မှီ ခေတ္တမျှ ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ၅မိနစ်ခန့် အရင်ထုတ်ထားပေးပါ။
၉။ ပြီမှ ကူဖီမလိုင်အေးအေးလေးကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Posted in အိန္ဒိယ ဟင်းလျာချက်ပြုတ်နည်း | 42 Comments
on March 15, 2012 at 6:44 am | Reply waiphone
စားပွဲတင်ဇွန်းဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးကို ပြောတာလဲဟင်
ပြီးတော့ ရေခဲသတ္တော ဘယ်အထပ်ကို ထည့်ရမှာလဲ
ပုံမှန် အသီးအရွက်ထည့်တဲ့ အထပ်လား သိချင်လို့ပါ။
on March 15, 2012 at 8:30 am | Reply chowutyee
ဘယ်လို ရှင်းပြရမှန်းတောင် သိတော့ဘူး… စားပွဲတင်ဇွန်း(1 tbs) နဲ့ လက်ဘက်ရည်ဇွန်း(1 ts) ကို ခွဲခြား သိချင်ရင် http://www.gourmetsleuth.com/images/measuring_spoons.jpg မှာ တချက်ကြည့်လိုက်ပါနော်… ရေခဲခဲတဲ့အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ထည့်ပေးရမှာပါ.. လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. 🙂
on March 15, 2012 at 7:35 am | Reply စန္ဒကူးမေ
on March 15, 2012 at 8:31 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ မစန္ဒကူးမေ လုပ်စားကြည့်ပါမ.. လုပ်ရတာ မခက်ဘူး၊ အချိန်ပဲ နည်းနည်းကြာတာရယ်.. ကျေးဇူးနော်.. 😛
on March 15, 2012 at 8:08 am | Reply lay lay nge
Thanks you so much. I’ll try at home 🙂
on March 15, 2012 at 8:32 am | Reply chowutyee
Plz try it sis! Thanks you too 😀
on March 15, 2012 at 9:43 am | Reply Kay Khine Win
Thanks ma, I like it.
on March 15, 2012 at 1:06 pm | Reply chowutyee
Thanks also sis yay, plz try it alos ! 🙂
on March 15, 2012 at 9:53 am | Reply 123layeikcho@gmail.com
on March 15, 2012 at 1:14 pm | Reply waiphone
on March 15, 2012 at 2:24 pm | Reply chowutyee
Plz try it.. Thanks 😛
on March 15, 2012 at 2:58 pm | Reply jewel
on March 15, 2012 at 3:37 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ် လုပ်ရတယ်လွယ်ပါတယ် ညီမရေ… လုပ်စားကြည့်နော်.. 🙂
on March 15, 2012 at 3:07 pm | Reply moemoe
ကျေးဇူးပဲကွယ် …..စားချင်နေတာ ၄နှစ်လောက်ရှိပြီ….
on March 21, 2012 at 8:03 am | Reply chowutyee
on March 15, 2012 at 3:34 pm | Reply ခင်ယမုံ
ဖာလာစေ့က အဝါရောင်လေးကို အပြင်က အခွံလေးပါတယ်တယ်မှလားဟင်.?
on March 15, 2012 at 3:46 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ် မခင်ယမုံ ဖာလာစေ့က စိမ်းဝါလေး၊ အခွံထဲက အစေ့လေးကို ထောင်းပြီ အနံ့၊ အရသာအတွက် နည်းနည်းလေး ဖြူးရုံပဲ။ လုပ်စားကြည့်ပါနော် မရေ.. thanks 😀
on March 15, 2012 at 4:39 pm | Reply အန်တီတင့်
on March 17, 2012 at 3:28 am | Reply chowutyee
အန်တီတင့် လုပ်စားကြည့်ပါနော်… ၀တ်ရည်ကလည်း အထူးကျေးဇူးပါ… 🙂
on March 16, 2012 at 2:26 am | Reply yuki
ဝတ်ရည်ရေ..မေလ်းဖွင့်လိုက်တော့ ကူဖီမလိုင် လို့ တွေ့လိုက်တော့ အရမ်းကိုပျော်သွားတာ..ဒီတပတ်စနေ အမျိုးသားက ကြာဇံကြော်မယ်ဆိုတော့ တို့လည်း ဝတ်ရည်ရဲ့ ကူဖီမလိုင် နဲ့ လက်စွမ်းပြန်ပြရတော့မယ်လေ..ကျေးဇူးတင်တယ် ဝတ်ရည် ရေ…နို့ကူဖီမလိုင်ကိုငယ်ငယ်လေးထဲက အရမ်းကြိုက်တာ..နောက်လည်းအချိုပွဲတွေများများတင်နော်…
on March 17, 2012 at 3:31 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်နော်.. 🙂
on March 16, 2012 at 3:32 am | Reply Ant.
on March 17, 2012 at 3:57 am | Reply chowutyee
ဆန်မှုန့်က အစိမ်းမှုန့် ထည့်ရမှာပါ.. 🙂
on March 16, 2012 at 10:20 am | Reply မိုးမိုးစံ
on March 17, 2012 at 3:58 am | Reply chowutyee
ဆန်မှုန့်က အစိမ်းမှုန့်ကို သုံးရမှာပါ။ လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. 🙂
on March 17, 2012 at 12:37 am | Reply lay lay nge
ဆန်မှုန့်က အစိမ်းလား အကျက်လား မသိလို့ ။ အစိမ်းတထုပ်ဝယ်လာလိုက်တယ်။
သီဟိုစေ့ အဖြူရောင်ကရော အစ်ိမ်းပဲလား မ၀တ်ရည်။ အကျက်ကလေ နီညိုရောင် ကြီး။
ဘယ်ဟာသုံးရမလဲ ပြောပြပေးပါအုံး 🙂
on March 17, 2012 at 4:03 am | Reply chowutyee
ဆန်မှုန့်က အစိမ်းမှုန့်ပါ။ သီဟိုစေ့က အဖြူရောင် အစိမ်းကိုပဲ မညက်တညက် ထောင်းပြီ ထည့်ရမှာပါ.. လုပ်စားကြည့်ပါနော်
on March 19, 2012 at 5:29 am | Reply သဲသဲ
thz…. wut yee….. i like it. 🙂
on March 21, 2012 at 8:00 am | Reply chowutyee
Thanks you too sis! 🙂
on March 21, 2012 at 2:17 pm mu yar
ညီမတော့ အလုပ်ရှုပ်သွားတော့မှာပဲ။ ကျေးဇူးပါ။ စောင့်နေပါ့မယ်ညီမလေးရေ။
on March 21, 2012 at 3:45 pm chowutyee
No Problem sis! After I try, I will surely post that recipe! 😀
on March 22, 2012 at 1:24 am mu yar
Thanks Nyi Ma Lay
on March 19, 2012 at 8:35 am | Reply ငယ်လေး
ကူဖီးမလိုင်ကို အရမ်းကြိုက်၏… လုပ်စားကြည့်လိုက်အုန်းမယ်..
မ၀တ်ရည်ရေ.. ကျေးဇူးပါ.. 😀
Plz try it ! 😛
on March 20, 2012 at 1:15 pm | Reply Mu Yar
ဖြစ်နိုင်ရင် အမကို မုန့်ကျွဲသဲလုပ်နည်းလေးပေးပါလားဟင်။ အမက ဗမာမုန့်အားလုံးကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ အချို့ကို မလုပ်တတ်သေးဘူး
on March 20, 2012 at 3:50 pm | Reply ငယ်လေး
ဟာ.. မမူယာပြောမှပဲ…သတိရတော့တယ်.. ငယ်လေးလဲ မုန့်ကျွဲသဲ အရမ်းကြိုက်တယ်..
မ၀တ်ရည် အဆင်ပြေရင်… မုန့်ကျွဲသဲ လုပ်နည်းလေး သင်ပေးပါလား….
on March 20, 2012 at 4:17 pm Mu Yar
အမတို့ အကြိုကိချင်းတူတယ်နော်။ အဖော်ရသွားပြီ။ မုန့်လုပ်နည်းရရင် စမ်းလုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်
on March 20, 2012 at 4:22 pm ငယ်လေး
ဟုတ်ကဲ့ မမူရာ… လုပ်နည်းလေး သိတာနဲ့ လုပ်အုန်းမှာ.. 😀
on March 20, 2012 at 4:37 pm Mu Yar
online မှာ၇ှိနေတာလား။ ဘယ်မှာနေတာလဲဟင်။
မမက ယပလက်နဲ့ယာတဲ့ မမူယာနော် 🙂
မုန့်ကျွဲသဲ တော့ ၀တ်ရည်ကိုယ်တိုင် တခါမှတော့ ကိုယ်တိုင် လုပ်စားဖူးသေးဘူး။ လုပ်စားကြည့်ပြီတာနဲ့ ချက်နည်းနဲ့တကွ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်နော်..
on May 25, 2012 at 7:45 am | Reply yoeyoe
မနေ့ကပဲ ကူဖီး လုပ်စားဖြစ်တယ် .. အဆင်ပြေတယ် သိလား .. အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်လို့ပါ..